KT Ambatovinaky Officiel
Miarahaba anao amin'ny anaran'i Jesosy ilay tia antsika mitsidika ity tranokalam-pifandrasana an'ny KT Ambatovinaky (Kristiana Tanora Ambatovinaky) ity. Tsy sendrasendra no itsidihanao ity fa fitantanan'ilay Mpahary mba hananao anjara avy amin'ny alalan'ny asa fitoriana izay ataon'ny KT Ambatovinaky amin'ny alalan'izao trano-kala izao, irinay ny hitondranao sy handraisana an'i Jesosy mialohan'ny hanakatonanao ity pejin-tseraserantsika ity. Ho tahin'i Jesosy isika rehetra e!
Hihira ho an'i Jehovah aho raha mbola velona koa...Salamo 104:33a
Fa aoka ny teninareo ho Eny, eny; Tsia, tsia; fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ny ratsy. Matio 5:37
Zava-kendren’ny KT Ambatovinaky
1. Manamafy orina ny finoan’ny mpikambana araka ny Soratra Masina.
2. Mampianatra sy mitarika ny Tanora ho vavolombelon’i Jesosy Kristy eo amin’ny fiainany manontolo.
3. Mitaiza sy mampitombo ireo talenta sy fanomezam-pahasoavana nomen’Andriamanitra ho fampandrosoana ny Fiangonana sy ny mpiara-belona.
4. Mitaiza sy manabe ny mpikambana amin’ny maha-olona feno azy : Saina, Vatana, Fanahy.
5. Mitory ny Filazantsara amin’ny hafa indrindra amin’ny Tanora, ka mitaona ireny ho ao amin’ny Fiangonana.
Miorina eto amin’ny Fiangonana Loterana Malagasy Ambatovinaky, Fitandremana Ambatovinaky, Fileovana Ambatovinaky Synodam-Paritany ANTAnanarivo (SPANTA) ny Sampam-pikambana miandraikitra ny fanabeazana sy fitaizana ary fitoriana ny Filazantsara amin’ny Tanora antsoina hoe KT AMBATOVINAKY.
Ny Kristiana Tanora mpihira ato amin’ny F.L.M Ambatovinaky no mikambana ho KRISTIANA TANORA Ambatovinaky.
Fandrio dieny izao eto ny fandaharam-potoanao
Ireo vokatra misy
Andriamanitra Mpamonjy Mahery
Ity no raki-kira voalohany navoakan'ny antokom-pihira tamin'ny taona 2001, ahitana hira 11 ao anatiny.
Raki-kira nivoaka faha-roa teto amin'ny amin'ny KT Ambatovinaky. Misy hira 10 izay nivoaka ny taona 2003.
Raki-tsary nivoaka ny taona 2005 ary misy hira 11.
Album faha 4 nivoaka ny taona 2016 izay misy Audio sy DVD. Anisan'ny be mpankafia indrindra izy ity.
Navoaka ity raki-kira sy raki-tsary ity ny taona 2016 ho fahatsiarovana ny jobily faha-30 taona ny chef de choeur'ny KT Ambatovinaky izay ahitana hira 13. Misy Audio sy DVD.
Album 5 izay nivoaka farany teo (2019), Audio no misy amin'izao fa eo ampanatontosana ny DVD izahay. Ahitana hira 10 ao anatiny.
Vidio, Jifao Ho fanohanana ny asan'Andriamanitra
Totoho-bato Antaninarenina Antananarivo
Radio Tenin'ny Fiainana
RTF Antananarivo FLM Ambatovinaky
Eny amin'ireo mpikambana tsirairay ao amin'ny KT Ambatovinaky
Na antsoy ny +261 33 08 843 26 / +261 34 13 706 38
Andriamanitra Mpamonjy Mahery 71
Fa isika tsy mba naman'izay mihemotra 33
He teraka any Betlehema 37
Jesosy be fitia 38
Jesosy Irery Ihany 33
ka handroso aminy hitsim-po 35
Louons Notre Seigneur 36
Ny herin'ny teny 37
Ô, asandrato re ny feo 35
Ny vavako hitory ny anaranao 36
Lalana tsara 35
Jerosalema vaovao 65
Ô, ankalazao 39
Avelao ny fahotako 36
Manga volon-danitra 53
Eo ampototr'ilay hazo 39
Ora farany 78
Tsy mendrika 42
Izay hasambarako 40
Efa resy 36
Derao Andriamanitsika 54
Ekeko ny hitia 39
Raha ny sofina 70
Fikiro Mafy 132
Iza moa Jesosy 41
Mamindrà fo 59
Ho aiza mo ianao? 48
Ampiraiso fo 58
Hanaraka anao 47
Jesosy ô! 45
Roahy ny devoly 61
Misaora Azy 68
Mivoria iaby e! 63
Raha mbola misy 12
Tiako anie izay Olona izay 51
Tsy haiko tantaraina 43
Izany no fiainako 8
Nisy namoaka 40
Saro-piaro aminao Izy 11
Namako ianao 42
Mpandresy izahay 55
Hosana! Hosana! 39
Mandrakizay ny fiderana 59
Mahery ny Andriamanitray 9
Hihira hoan'i Jehovah aho 3
Tsy ny lalana no sarotra 86
Iraho ny Fanahy 62
Jehovah no mpiandry ahy 64
Mr Lauret Albert
Mr Andry H
Mr Tsiory Mi-Ranto
Hafatra amin'ny mpankafy
Mankasitraka fa nisokatra ihany ilay Site Web tompoko, misaotra
Mahereza amin'ny asan'i Jesosy tompoko dia tohizo ny ezaka efa natomboka.
Tsara ny asan'n Tompo. Mankasitraka ny KT Ambatovinaky
Mivavaka ho anareo rehetra mpikambana mba haharitra hatramin'ny farany
+261 34 13 706 38
Fifandraisana tsy tapaka amin'ny antso antari-bihy. Afaka mandray anao isan'andro ary madeha 24h/24h ary 7j/7j.
Afaka andefasanao hafatra na famandriam-potoana. Aza misalasala manoratra aty aminay.
Toerana ahitana anay tsy tapaka. Tongava raha misy mampisalasala anao na fiaraha-miasa tianao atao.
Téléphone : +261 34 13 706 38
Mail : contact@ktambatovinaky.mg
© 2020 Copyright KT AMBATOVINAKY Team | Powered by MDBootstrap.com